Ny Fivoaran’ny Fiahiana Ara-tsosialy Aty Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2012 12:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, Swahili, Español, 한국어, русский, Português, Italiano, Français
Raha tarafina amin'ny resabe ateraky ny fanavaozana ny fiahiana ara-pahasalamana any Etazonia [en] sy ny fisintahan'ny fanjakana miandalana amin'ny resaka ara-tsosialy ao Frantsa, dia azo ambara fa fomba fanao efa an-dàlampahalevonana ny resaka fiarovana ara-tsosialy. Kanefa, ny zo hoarovana dia isan'ny singa tafiditra tanteraka ao anatin'ny Fanambaràna Erantanin'ny Zon'Olombelona (andininy faha- 22) ary ampahany tena manana ny lanjany [en] amin’ ireo Tanjon'ny Taonarivo Ho an'ny Fampandrosoana (OMD) napetraky ny Firenena Mikambana. Ny fametrahana rafitra iray ho fiahiana ara-tsosialy dia tena mbola an-dalam-pivoarana tokoa ho an'ny ankamaroan'ireo firenena aty Afrika. Samy nifidy rafitra iray manokana mifanaraka amin'ny kolotsainy ny governemanta afrikana tsirairay, izay azo lazaina ho nahomby amin'ny ampahany ihany, saingy ny rehetra dia miara-mahatsapa ny filàna ny fiarovana, na faran'izay kely aza, ho an'ireo tena mponina marefo ao aminy.
Assane Fall-Diop dia mamintina ireo ady mbola hatrehana mba hanànana fiahiana ara-tsosaly tena izy aty Afrika :
Lambert Gbossa dia manazava ho an'ny Office International du Travail (OIT) ny antony iheverany fa ny fiahiana ara-tsosialy dia mitontongana saiky manerana ny kaontinanta. Ny tosiky ny fihariana tsy manara-penira no isany, hoy izy, antony iray lehibe amin'izany :
Nisy ny fepetra noraisina mba hanenjehana io fahataran'ny fandrosoan'ny fiahiana ara-tsosialy io eto amin'ny kaontinanta. Ny Vovonana ho an'ny fiahiana ara-tsosialy aty Afrika (APSP) [en] dia te-hitondra fepetra mivaingana ho fampahafantarana sy fanamafisana ny fifanarahana ara-tsosialy eo amin'ny Fanjakana sy ny vahoakany. Araka izany, ny APSP dia mandrisika hoe :
Manahy anefa i Lambert Gbossa amin'ny loza ateraky ny finiavana hitondra rafitra lasitra amin'ny resaka fiahiana tsy ijerena akory ny maha-izy azy ny faritra tsirairay sy tsy ialohavana fifampidinihana ara-tsosialy :
Ny tsy maintsy handraisana an-tànana ny aretina dia napetraka tamin'ny 2010 tao Mali. Io fandaharan'asa io dia nahafahana niaro tsara ireo vahoaka vitsy an'isa sy voahilikilika [en] saingy tsy afaka nahafahana nanamafy ireo andry roa hafa amin'ny resa-piahiana ara-tsosialy tao Mali izay ny fampandrosoana ny foto-drafitrasam-pamokarana sy ny fanamafisana ny resaka fanitsiana ara-drafitra. Mitoetra ho iray amin'ireo olana goavana sedraina amin'ny fiantohana ireny fandaharanasa sosialy ireny ny resaka loharanom-bola.
Misy fototra mafy ho an'ny fiahiana ara-tsosialy izao an-dàlam-pametrahana azy ao Burkina Faso . Ny foto-kevitra ijoroan'ity fototra mafy ho an'ny fiahiana ara-tsosialy ity dia miankina amin-javatra roa tena lehibe: ny tolotra sy ny famindram-pitantanana. Olivier Louis antsoina hoe Guérin dia manazava ny votoatin'ireo fitaovana roa ireo :
Tanaty fanadihadiana iray fampitahàna an'ireo rafitra fiahiana ara-tsosialy ao Roandà sy Borondi, ny Solidarité Mondiale dia manome ny famintinana manaraka etoana momba ny fiahiana ara-tsosialy any amin'ireo firenena roa mpifanolo-bodirindrina ireo :